Dhugaa fakkeessanii afaanfaajjii uumuun, uummata Oromootiif dubbachuu hin ta’u | Oromia Shall be Free
bilisummaa April 3, 2013	Comments Off on Dhugaa fakkeessanii afaanfaajjii uumuun, uummata Oromootiif dubbachuu hin ta’u
Kanaaf, warra jijjiiramaas ta’e gareen kamiiyyuu karaa itti amananiin tattaaffii yoo godhan, ani akka nama tokkootti kanarraa rakkoo hin qabu. Dhugaan dagatamuu hin qabne fi iccitii hin taane garuu, akkuman barruu kiyya kan kana duraa sana keessatti ibsuu yaale, gaafiin ammas banaa ta’ee jiru:Habashootni fedhii fi kaayyoo isaanii ifa godhanii, kan hin barbaadne fi hin hawwine nutti himaa otuu jiranuu; tumsa waliif taanee Wayyaanee kuffisuuf qofaa jennee; waan sana booda ta’uu danda’u tokkorratti kaayyoo keenya ifa otuu hin godhin; maalirratti waliigaluu dandeenya jennee isaan waliin tumsa ijaaruu barbaadna? kan jedhuu dha. Gaafiin biraa ammoo, otuu tokkoomnee mooraa keenya keessatti humna keenya hin cimsin dura, tumsa alaa barbaaduun nu gaaga’uu ykn miidhii hin danda’uu? kan jedhu ta’a. Kanaaf, tokkummaa ykn/fi tumsi mooraa QBO dursa argachuu qaba jedhee yeroo baay’ee barreessaa ture. Egaa, nama Abbaa Dhugaa ofiin jedhu kana dhugaa kanatu liqimsamuufii dideeree?? Olola narratti oofuun isaa maaliif akkana jetta jechuu isaa ta’inaa laata?
Yoo dura yaada isaa barreessuu jalqabu: “Abdii Boruu eennu akka taate ima beekna atis maqaa kee dhooysitu…” jedha. Asirratti, inni nama tokko, eenyuuf dubbachaa jiraa? Itti aansuu dhaan: “…yeroo qaama Shanee jala turte Dura Taa’aa AFD taatee hojjechaa turte ….” jedha. Achumaanis itti fufee: “…Ati erga Damee Dantaa Alaa irraa si kaasani…” jedha. Dura Taa’aa AFD fi ittigaafatamaa (gaafatamaa) Damee Dantaa Alaa eenyu akka ta’e inni maqaa kaasuu baatullee, waayee kana uummatni Oromoo otuu hin beekin hin hafan. Yaada bakkee biraatti dhiyeesserratti ammoo, namni kun waan jedhee barreesse asitti irra deebi’ee barreessuun yeroo ajjeesuu waan ta’uuf, yaadolee namticha kanaa hunda isaaniituu barruu kiyyaa gaditti dhiyeessee jira; dubbistootni barruu kiyyaa akka ilaalan kabajaan gaafachuun barbaada. Namni kun waa hundaafuu ittigaafatamaa na godhuuf (fakkeessuuf) waan inni hin yaalin hin jiru. Kan nama dinqu garuu, gaafiilee inni tarreesse keessaa “…WBOn akka rukutamu hin goonee?…”jedhee waa hundaa gara garaa funaanee; balleessa nama tokkoo godhee dhiyeessuu isaa ti.
“Dhuguma Itoophiyaan isaanii biyya haadha hundaatuu ta’uu dandeessii?”
jedhurratti yaadolee namni Abbaa Dhugaa jedhamu dhiyeesse:
1) Abdii Boruu eennu akka taate ima beeyna atis maqaa kee dhooysitu. Dubbiin kan maqaa keetiitiimiti. qaphxiiwwan ati kakaafteedha malee. Sabaaf Sabloota wajjiin walgargaarisfatuun amma Jijjiiramaan dhihaate kun maaf ajaa’iba sitti ta’e. Yeroo Qaama Shanee jala turte Dura Taa’aa AFD taatee hojjataa hin turre? Kaayoo dhooysaa tan hoogganoota Barcuba Yubaa wajjiin oofaa turte tan Dr.Diimaa Nag’o haasawa ESAT irrtti godhan kan jedhan nuti takkuu Oromiyaan ni buqqaatti jedhutti amnnee hin beeyne jedhaniin saniin maal jetta. Ati eega Damee Dantaa Alaa irraa si kaasan dhaabdi diigamuu qaba jetta. Waayeen dhaabbota adda addaatiin walii galanii Mallas aangorraa kaasuu kanatti akka dhibbaaf dhibbatti amantu hubatamaadha. garuu wanni ati ganamaa galgala mul’ii hidhattee olola adda addaa kan oromoota gandaan, naannoo fi amantiin adda diigutti fayyadmuu barbaadduf ani aanoo irraa maaf bu’e tokkummaa kanas maaf ani abbaa itti ta’uu dhabe jechuu irraa kan hafe Itiyoophiyaa jibbitee yookaan Oromoof yaaddeetiimit.
2) Deebii Abdii Boruutii kennamerratti namooni gariin akka ufii isaaniitii yaadanitti kennatan. Yaada keennachuun mirga isaaniiti. Garuu dhugaan jirtu Abdii Boroo yeroo hedduu gaafiis ufuma isaatiif gaafatee deebiis keenna. Namoonni asirratti waa jejje’anis isumatuu maqaa hedduu baafatee waa barreessa malee yaanni isaa gargaarsa argateetiimiti. Gama qaphxii Abdii Boruutitti yoo deebi’e, Abdiin wanni je’u ani tokkummaa Oromootiif malee waa keessaa argachaafiimiti je’a. kuni garuu dhugaa jirturraa waan fagaateedha. Abdii Boruu Odoo dhugaan tokkummaa ykn araara Oromoo feetee, Modreet Liidersi jettee Qaama Shanee keessa Garee O/Daawud Ibsaa kan akka Tamaam Yusu, Odaa Xase, Bultum Biyyoo f’a’a, akkuma san Garee Generaal Kamal Galchuu keessaas namoota ati fedhii irraa hin qabne alatti dhiisuun mataa kee dura taa’aa gootee filamuuf uf qopheessuun tokkuummaa ummata oromoof hojjachuu je’ama? O/Daawud fa’as araara oromummaa diduu odoon taane shira ati deemtuun arganii sirratti dammaqa. Abbaan kee, obboleessi keetiif warri soodhaa wiskiin walitti areeree si unsiisu dhugaa jirtu fudhachuu hin fedhan. Garuu wanni ati fi warri ati hurrii itti haguugdee deemtuun hubatuu qaban shira keessan ummanni oromoo hubatuu isaati.
3) Abdii Boru, Quuqaa ummata kiyyaatiif malee waan biraatiif kan hin godhu jetta. Quuqaa hin fayyine kan ummata oromoo fi dhaabbota oromoo eddutti uume si tahuu ummanni hubatee jira. Quuqaa ummata kiyyaaf dhukkubsadhe jette: diinaggee ummataa hagam cafaaccafaa baate? oromoon bal’an hafee nu warra si wajjiin naannoo tokkaa keessatti summii hin fayyine hin uumne? Kuni baddaa kuni gammoojjii, kuni bishaan gamaa dhufe kun bishaan gamaati jechuun ummata wal’awwaalu akka lagatu hin goosifne? Qabsaawotarratti ololchiisaa hin turre? WBON akka rukutamu hin goonee? hoogganoonni ddhaabbota oromoo mootummoota ollaa keessatti akka olii gadi socho’uu hin dandeenneef sababaa hin taanee? Hiriiroo edduu oromoo taa fi kan alagaatitti summii hin facaafne? maqaa araara tokkummaatti fayyadamtee dhaabbota adda hin ciccirree? Haalli akkanaa kuni quuqaa ummata oromoof dhukkubastuudha caalatti isaani quuquudha? yaada ani kennadhau kanas waayee haasawa dhaabbonni dhaabbota habashootaa wajjiin godhanitti irkisuu barbaadda. ani inni suni sirriidha sirriimiti jechaa hin jiru. atu yeroo dhaabbota habashootaa wajjiin hojjataa turte gammchuu guddaan akka sitti dhagahametti teessoo irratti dubbataa turtee kan ammaa kuni maaf dinqii sitti ta’e jechuu kiyya. ati kana hunda wanni gooteef akkuma duritti maallaqa hawaasni oromoo dhaaba isaa jiraachisuuf gumaachu teettee nyaata waan baratteef. amma maallaqni duraan maqaa adda addaa itti baaftee cafaqataa turte waan sirraa dhaabataa dhufeef hirriba malee bulaa jirta. akkuma san aangoon qabaataa turte waan sitti xiqqaatteef dura taa’aa ta’uu waan dhabdeef. odoo ati dandeettii summii ummata keessatti uumuu malee tan ummata oromoo hogganuu dandeettu qabaattee harki lamaane hafee miila lamaanis fiif baafna ture. ati amma anaan’anuu ittuma fuufta. kanaa ol yaada kee wajjiin yeroo kiyya hin gubu. kan ati beekuu qabdu ummanni oromoo shira kee hubate jechuu beeki.
Previous Dhuguma Itoophiyaan isaanii biyya haadha hundaatuu ta’uu dandeessii?
Next Qubeen Afaan Oromoo mallattoo bilisummaa ti, dhalootni qubee ammoo abdii egeree ti
Amaan Kamsareetiin Waan Mootummaa Bilxiginnaa Buqqiftee Aangoo Oromiyaa Fudhachuu Dubbadhu! Seenaa fi maalummaa riphee-lolaa ilaalchisee …